Posted at 10:15 29 Agoosto 202110:15 29 Agoosto 2021
Iyadoo jirta 74 sano, ayaa Agnes Sithole waxay geesiyad u noqotay haweenka madow ee ku nool Koofur Afrika kaddib markii ay ku guuleysatay kiis maxkamadeed, kaas oo billowdya kaddib markii ninkeeda ay 50 sano ku dhowaad is qabeen uu isku dayay inuu iibiyo gurigooda.
Posted at 8:38 20 Agoosto 20218:38 20 Agoosto 2021
Sida luuqadda Ingiriiska ay u lumisay luuqadaha dadyowga Afrika
Dadyow badan oo reer Afrika ah ayaa lumiyay luuqaddooda hooyo sababo la xiriira luuqadda Ingiriiska oo ay ka dhigteen luuqadda keliya ee ugu habboon ee lagu hadlo iyo in guusha mustaqbalka ay ku xiran tahay barashada luuqadda Ingiriiska.
Posted at 5:40 20 Luulyo 20215:40 20 Luulyo 2021
Bililiqada Koonfur Afrika ma si qarsoodi ah ayaa loo qorsheeyay?
Posted at 15:13 13 Luulyo 202115:13 13 Luulyo 2021
Tirada Soomaalida ee ku dhimatay rabshadaha Koonfur Afrika
Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa ayaa ugu baaqay dadka in ay "ka hortagaan rabshadaha" iyada oo laga jawaabayo qalalaasaha ay dadka badan ku dhinteen ee ka dhashay xariga Madaxweynihii hore, Jacob Zuma.
Posted at 15:10 13 Luulyo 202115:10 13 Luulyo 2021
Jaaliayadda Soomaalida oo ka hadashay dhibaatada Koonfur Afrika
Video caption: Jaaliayadda Soomaalida oo ka hadashay dhibaatada Koonfur AfrikaJaaliayadda Soomaalida oo ka hadashay dhibaatada Koonfur Afrika
Ugu yaraan 30 qof oo ay ku jiraan 4 Soomaali ah ayaa ku dhimatay rabshadaha ka taagan qeyba ka mid ah Koonfur Afrika ee bilowday markii la xiray madaxweynihii hore Jacob Zuma.
Posted at 3:38 8 Luulyo 20213:38 8 Luulyo 2021
Jacob Zuma oo habeenkii ugu horreeyey xabsiga ku hoyday
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Jacob Zuma ayaa isu dhiibay booliiska si uu u bilaabo xukun xabsi ah oo ku saabsan quursiga maxkamadda.
Posted at 4:52 28 Juunyo 20214:52 28 Juunyo 2021
Dowladda Koonfur Afrika ayaa lagu dhaliilay inay taageerayso qorsho ka dhan ah dhaqanka Afrikaanka si loo xoojiyo "sinnaanta" jinsiga.
Posted at 20:39 17 Juunyo 202120:39 17 Juunyo 2021
Kenneth Kaunda, madaxweynihii koobaad ee Zambia ahaana ninka ka nool jiilkiisii hogaamiyeyaasha Afrikaanka ah ee gumaysiga la dagaalamay, ayaa geeriyooday isaga oo 97 jir ah.
Posted at 14:49 9 Juunyo 202114:49 9 Juunyo 2021
Haweeney dhashay 10 canug oo mataane ah
Gosiame Thamara Sithole, oo 37 sano jir ah, ayaa dhashay 10 canug oo mataane ah, balse waxaa loo maleynayay in 8 canug ay siddo.
Posted at 15:35 22 Maajo 202115:35 22 Maajo 2021
Bog 1 of 6